मनोरन्जन Archives - Page2of 8 - Valley Khabar
हिजो साँझै बाट उनको फोन अफ छ । फेरी एक पटक फोन ट्राई गरें, नेपाल टेलीकमकी युवतीले फेरी उसं गरि भनिन ‘तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको मोवाईलको स्वच अफ गरिएको छ ।’ फेसबुक अन गरें, […]
यौन कथा : सत्य वास्तविक ,उमेरता पुगेकाले मात्र पढ्नुहोस, स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी उपमा जागिर छोडेर यौन धन्दामा
August 16, 2019 dhan kush
२४ वर्षीया उपमा (नाम परिर्वतन)को कथा केही फरक छ । स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी उपमाले आमाको पाठेघरमा पलाएको ट्युमरको उपचार गराउन एउटा फाइनान्समा रिसेप्सनको जागिर सुरु गरेकी थिइन् । जागिर थालेको एक हप्ता पनि नबित्दै उनी फाइनान्समा नियमित […]
August 15, 2019 dhan kush
म २५ वर्षीय विवाहित पुरुष हुँ । मैले मेरी श्रीमतीसँग यौनसम्पर्क गर्दा उनले मेरो वीर्य मुखमा हालिन् । वीर्य खाँदा स्वास्थ्यमा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने त्यसको उपचारका लागि के गर्नुपर्ला ? […]
अधुरो इच्छा (यौन कथा)
सुन्नुहोस् न झ्याल थोरै खोलौँ न है ? कानमा ठोक्किन आईपुगेको न्यानो तथा अपरिचित आवाजले निन्द्रा विथोलिदियो । हुन्छ, थोरै खोल्नुहोस् न मैले स्विकृतीको श्वरमा नम्र आवाज फर्काएँ । उनले सहजताका साथ झ्याल खोलिन् अनी […]
विवाहको रात सेक्स भएन तर अन्य धेरै कुरा भए….
दुई वर्ष पहिले मैले आफैंसँग विवाह गरें । विवाहको दिन मेरो जीवनको सबैभन्दा उत्कृष्ट दिन थियो । म विन्टेज गाउनमा थिएँ र रसाएका परेलीले मेरो पिताले मलाई विदाई गरेका थिए । मेरा थुप्रै साथीहरु विवाहमा […]
सुत्ने बेलामा फोन गरि उसले। मैले ढिला नगरी ब्लान्केट भित्र पसेर फोन उठाएँ। “के गर्दै हुनुहुन्छ? सुत्ने बेला भएन?” “तिमिलाइ सम्झेर बसेको।” म जिस्किएँ। “किन सम्झिनु त अनि सुत्ने बेलामा।” उसले खित्का छोडी। “त्यही सुत्ने […]
नेपालीहरु इन्टरनेटमा के सर्च गर्दा रहेछन्? अरुतिर त थाहा भएन तर गुगल वा अन्य सर्च इन्जिनमा कसैले केही टाइप गरेर खोज्यो र त्यसैमार्फत् माइसंसारमा क्लिक गरेमा त्यो यताबाट (वर्डप्रेसको सर्च टर्ममार्फत्) हेर्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ त […]
रुपा नामले मात्र होइन वास्तविक रुपमा नै निकै राम्री थिई । काली–काली हिस्सी परेकी, सलक्क परेको जिउडाल र यौवनले भरिपूर्ण शरीर भएकै कारणले होला गाउँका सम्पूर्ण युवकहरु रुपा भनेपछि मरिहत्ते गर्ने गर्दथे । रुपालाई आर्कषित […]
काउकुति लाउने बहानामा प्रियाले यस्तो भिडियो सार्बजनिक गरिन
गाउँको एक जना बहिनी काठमाण्डुमानै बस्थी । उनको नाम प्रिया हो र उनि २१ बर्षकी थिई । कहिलेकाँहि फोनमा कुरा हुन्थ्यो त कहिलेकाँहि भेट पनि हुन्थ्यो । एक दुई चोटी मलाई भेट्न मेरो घरमा पनि […]
पछिल्लो समय युवा युवतीहरुमा हस्तमैथुनलाई लिएर धेरै भ्रमहरु रहेका छन । हस्तमैथुनका सन्र्दभमा विश्वका धेरै मानिस भ्रममा रहेका छन, कसैले हस्तमैथुनलाई यौन आनन्दको राम्रो विकल्प मान्छन भने कतिपयले नियमित जसो गर्ने हस्तमैथुनलाई कुलतको रुपमा पनि […]